အောက်ချင်းအေဂျင်စီ - ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် လူဦးရေ နှစ်သိန်းနီးပါးခန့် ထိခိုက် - The Hornbill News Agency
ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် လူဦးရေ နှစ်သိန်းနီးပါးခန့် ထိခိုက်
aung7 9:53 PM No comments:
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၅
မိုးရွာသွန်းမှုများခြင်း၊ ဆည်များမှ ပိုလျှံရေများအား ရေပိုလွှဲမြောင်းမှ စွန့်ထုတ်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဒေသအတော်များများတွင် ရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ခြောက်ခုအတွင်း လူဦးရေ နှစ်သိန်းနီးပါးခန့် ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ် ခံစားခဲ့ရကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းများက ဆိုသည်။
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၃ ရက်အထိ ၀န်ကြီးဌာန၏ စာရင်းကောက်ယူမှုများအရ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဒေသများမှာ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့ ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၁၇၂,၀၅၂ မှာ ရေကြီးလျှံမှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရသည်။
စစ်ကိုင်တိုင်းတွင် လူဦးရေ ၂၄၂၇၄ ဦး (အိမ်ခြေ ၅၅၁၄ လုံး)၊ မန္တလေးတိုင်းတွင် ၄၂၁၄၉ ဦး (အိမ်ခြေ ၉၀၉၀ လုံး)၊ မကွေးတိုင်းတွင် ၂၄၀၄၄ ဦး (အိမ်ခြေ ၂၂၇၆၀ လုံး)၊ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ၂၁၆၁ ဦး (အိမ်ခြေ ၅၃၈ လုံး)၊ ပဲခူးတိုင်းတွင် ၃၅၅၅ ဦး (အိမ်ခြေ ၈၉၆ လုံး)နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၈၁၁ ဦး (အိမ်ခြေ ၁၆၉ လုံး) တို့ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါ လူဦးရေမှာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၀၆၅၇ စုအား ကိုယ်စားပြုထားသည့် အရေအတွက်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စုအားလုံးမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် မိမိတို့၏ နေအိမ်များအား စွန့်လွှတ်ကာ ရေလွှတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့ရှိ ဖောင်းကူးရွာဟောင်းနှင့် ဖောင်းကူးရွာသစ် အနိမ့်ပိုင်းရှိ နေအိမ်အချို့တွင် သြဂုတ်လ ၄ ရက်က အမြင့် ၂ ပေခန့်အထိ ရေတက်ခဲ့သော်လည်း ရေတက်နှုန်းမမြန်သဖြင့် စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကာ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်ဖြစ်သည့် ညောင်ပင်သာတွင် သုံးပေခန့်နှင့် အောင်မြင်မာန်ရပ်ကွက် အနိမ့်ပိုင်းများ ရေ၀င်မှုများ ရှိခဲ့သည်။
About aung7 -
Aung Htun Linn.. The Hornbill News Agency.
Active, Deaths and Recovered List of Myanmar (Update) (1-5-2020)
ယခုအခြိနျအထိ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူ ၁၅၁ ဦးထိ ရှိပွီဖွဈကာ ပွနျလညျကောငျးမှနျ သကျသာလာသူ ၃၁ ဦးရှိပွီး ၆ ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။
ကျဆုံးရဲဘော်များအတွက် လှူမည့် IC အဖွဲ့လက်မှတ်ပါ ဂစ်တာကို ကျပ် ၂၁ သိန်းဖြင့် လေလံဆွဲ
Photo : Wanna Khwar Nee's Facebook ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA အဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်...
လာရာနဲ့ လားရာ ကွဲပြားလာမှုနဲ့ Self-esteem ပျောက်ဆုံးခြင်း
အခိုင်းခံ၊ အခြယ်လှယ်ခံများတွင် Self-esteem ပျောက်ဆုံးလေ့ရှိကြောင်း ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းက ရေးသားခဲ့ဖူးသည်။ Self-esteem ဆိုတာဟ...
အစိုးရကို အားကိုးခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် မဟုတ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
Photo : http://www.statecounsellor.gov.mm မြစ်ကြီးနား၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၁ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ လူထုကို အခြေခံသည့် စနစ်ဖြစ်၍ အစိုးရတစ်ခုတည်းအား...
COVID-19 ရောဂါပိုး ထပျမံတှရှေိ့သူမြားနှငျ့ နထေိုငျရာဒသေမြား (Update - 10.6.2020)
ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ ဇှနျလ ၁၀ ရကျအထိ ထုတျပွနျခကျြအရ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူ ၂၄၆ ဦးရှိပွီး ရောဂါပိုးကငျးစငျသူ ၁၅၉ ဦးထိ ရှိလာပွီဖွ...
နိုင်ငံတစ်ခုတွင် မဏ္ဍိုင်လေးရပ် ရှိသည်ကို စာဖတ်သူတို့ သိပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မဏ္ဍိုင်ငါးရပ် ရှိသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြု...
ခေတ်ကာလ ခံယူချက်တွေအောက်က လေ့လာမိတဲ့ ရိုးရာခွါဒိုပွဲတော်
Photo : World Tourism Day လူမျိုးတစ်မျိုးကို သတ်မှတ်ရာမှာ ရိုးရာပွဲတော်တွေကလည်း တိုင်းတာတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာတု...
ခပ်ဝေးဝေးကို ကြည့်လာတဲ့ NLD ဗျူဟာအောက် ကြံ့ခိုင်ရေး ဘေးရောက်နေမှာပါ…
နယ်က ရောက်လာတဲ့ မိတ်ဆွေနဲ့ ပြန်တွေ့ခိုက် ထူးထူးခြားခြား စကားစပ်လေ့ ရှိတာက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအကြောင်းပါပဲ။ ပြောကြဆိုကြရင်းက ပြီးခဲ့...
အမှားတရားတွေ ကြီးစိုးနေသရွေ့ လိုအပ်နေဆဲ Crusades Journalism
Crusades Journalism. ဒီစကားကို စတင်ပြောပြခဲ့သူက ကွယ်လွန်တာ လေးနှစ် ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်။ သတင်းသမားတွေဟာ အမှန်တရားကို ...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းရေးအတွက် အခက်အခဲဟု တရုတ် ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရပ်ဆိုင်းခံထားရသည့် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းမှာ တရုတ် - မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အခက်အခဲတစ်ခ...
© Copyright 2016 The Hornbill News Agency. Designed by Kanaung.org. Powered by Kanaung.org.